ठूला पार्टीहरुको राजनीतिक सिण्डिकेट तोड्न मेरो उम्मेदवारी : गीता राणा... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुको कारण पार्टीको आस्था, बिचार, सिद्धान्तको संरक्षण गर्न हो । हाम्रो पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई बहुसंख्याक नेता कार्यकर्ताहरुको बिचारलाई लत्याउँदै हालको ठूलो पार्टी काँग्रेसमा बिलय गराइयो । बिलय गराए पनि आस्था त जीवितै छ नि ! ठूला पार्टीको एजेण्डा भनेको विकास मात्रै हो । तर हाम्रो एजेण्डा भनेको शोषित पीडित वर्ग, समुदायलाई सशक्तिकरण गर्र्र्नु, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने लगायत हो । हाम्रो सिद्धान्त, विधि, तरिका फरक छ । हरेक ठाउँमा विकल्प चाहिन्छ, प्रतिष्पर्धा चाहिन्छ । जबसम्म विकल्प नै हुँदैन तबसमम देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जनताहरु विकल्प पनि पाउन् र प्रतिष्पर्धा पनि होस् भनेर ठूला पार्टीहरुको राजनीतिक सिण्डिकेट तोड्नको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
क्षेत्र नम्बर ४ नै किन रोज्नुभयो ?
क्षेत्र नम्बर ४ मा धेरै काम गर्न बाँकी छ । सुगम पनि दुर्गम पनि छ यहाँ । स–साना समस्या धेरै छन्, मैले त मजाले बुझेको छु । अन्य दलहरु विकासको ठूला–ठूला आशा मात्रै देखाएर उम्मेदवारी दिएका छन्, मैले त स–साना समस्याको समाधान गर्न यो क्षेत्र रोजेकी छु ।
चुनावी एजेण्डा के–के हुन् ?
विकासको एजेण्डा सबै राजनीतिक दलको हो । म चाँहि विकास सँग–सँगै आमनागरिकलाई सशक्तिकरणमा जोड दिएकी छु । विकासको नाममा हामी धेरै पुल बनाउँछौ तर खोला नाला, रुख, हिमालको संरक्षणमा ध्यान दिँदैनौ । मैले त विकासको नाममा विनास नभई हिमाल, पहाड, बोटविरुवा, जंगली जनावरको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाल कैलालीमा कटानको धेरै समस्या छ । कटान नियन्त्रपण गर्ने मेरो प्रतिवद्धता हो । हाल सहरभित्रको बस्तीमा बाटो नभएर दुर्गम जस्तै छ । उक्त दुर्गम बस्तीलाई सुगम बनाउनको लागि पहल गर्ने छु । यहाँ विभिन्न जात जातिको बसोबास छ, तिनिहरुको संस्कृति, संस्कार, धर्मको संरक्षण गर्न पहल गर्ने र अल्पसंख्यक जातिको जिवनस्तर सुधार गर्ने मेरो प्रमुख एजेण्डा हुन् ।
जित्ने आधार के–के छन् ?
आमनागरिक सचेत छन् । नागरिकहरु सरल, सक्षम र केही काम गरेर देखाउने उम्मेदवारलाई रोज्छन् । म त यसै क्षेत्रको विकासको लागि सांसद भएको बेला र नभएको बेला पनि धेरै काम गरेकी छु । यो क्षेत्रको महिलाहरुको सशक्तिकरणको लागि तालिम, सडक ग्राभेल, दुई बस्ती जोड्ने कल्र्भट निर्माण लगायत जनताले चाहे अनुरुप पहल गरेको छु । मेरो कामको मुल्यांकन गरेर जनताहरुले आफ्नो मत दिनेछन् । मैले गरेको काम मेरो जित्ने आधार हो । मेरो सबै सांसद विकास कोषको बजेट यसै क्षेत्रको विकासमा खर्चेकी छु ।
विवादमा अल्झिएर चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति बनेमा कसैको भलो हुँदैन : डा भगवान कोइराला… [भिडियो वार्ता]